Luka Asɛmpa 11:1-54
Sɛnea wɔbɔ mpae (1-13)
Mpae ho nhwɛso (2-4)
Ɔde Onyankopɔn nsateaa na etu ahonhommɔne (14-23)
Sɛ honhom fĩ san ba a . . . (24-26)
Nea ɛde anigye ankasa ba (27, 28)
Yona sɛnkyerɛnne no (29-32)
Nipadua kanea (33-36)
Nyamesomfo a wɔyɛ nyaatwom nnue (37-54)
11 Bere bi, na ɔwɔ baabi rebɔ mpae, na bere a owiei no, n’asuafo no baako ka kyerɛɛ no sɛ: “Awurade, kyerɛ yɛn sɛnea wɔbɔ mpae, sɛnea Yohane nso kyerɛɛ n’asuafo no.” 2 Enti ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Bere biara a mobɛbɔ mpae no, monka sɛ: ‘Agya, wo din ho ntew.*+ W’Ahenni mmra.+ 3 Ma yɛn aduan* da biara sɛnea yehia wɔ ɛda no mu.+ 4 Na fa yɛn bɔne kyɛ yɛn,+ efisɛ yɛn nso, obiara a ɔde yɛn ka no, yɛde kyɛ no.+ Na mfa yɛn nkɔ sɔhwɛ mu.’”+ 5 Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Yɛmfa no sɛ mo mu bi wɔ adamfo, ɛnna ɔkɔɔ ne nkyɛn ɔdasum kɔka kyerɛɛ no sɛ: ‘M’adamfo, ma* me paanoo abiɛsa, 6 na seesei ara na m’adamfo bi fi kwan so aba me nkyɛn, na minni hwee a mede bɛma no.’ 7 Ɛnna w’adamfo no ka kyerɛɛ wo sɛ: ‘Gyae me haw. Yɛato ɔpon no mu dedaw, na me ne me mma nkumaa nyinaa adeda. Merentumi nsɔre mmɛma wo hwee.’ 8 Mereka akyerɛ mo sɛ, ɛnyɛ sɛ ɔyɛ n’adamfo nti na ɔbɛsɔre abɛma no biribi; mmom, guan a ɔreguan ne ho nti,+ ɔbɛsɔre abɛma no nea ohia biara. 9 Enti mereka akyerɛ mo sɛ, monkɔ so mmisa,+ na wɔde bɛma mo; monkɔ so nhwehwɛ, na mubehu; monkɔ so mmom, na wobebue mo.+ 10 Efisɛ obiara a obisa no, ne nsa bɛka,+ na obiara a ɔhwehwɛ no, obehu, na obiara a ɔbɔ mu no, wobebue no. 11 Mo mu hena paa na ɔyɛ agya a sɛ ne ba bisa no apataa a, ɔde ɔwɔ bɛhyɛ ne nsam na ɔremma no apataa?+ 12 Sɛ obisa no kosua nso a, ɔde akekantwɛre bɛhyɛ ne nsam anaa? 13 Enti sɛ mo a moyɛ abɔnefo mpo nim sɛnea moma mo mma akyɛde pa a, ɛnde mo Agya a ɔwɔ soro no nso ɛ? Ɔde honhom kronkron bɛma wɔn a wobisa no no ama aboro so!”+ 14 Akyiri yi, Yesu tuu honhommɔne bi a ɔma nkurɔfo yɛ mum fii ɔbarima bi mu.+ Bere a otuu honhommɔne no, ɔbarima a ɔyɛ mum no kasae, na ɛyɛɛ nnipadɔm no nwonwa.+ 15 Nanso wɔn mu binom kae sɛ: “Ɔde ahonhommɔne panyin Beelsebub* na etu ahonhommɔne.”+ 16 Ná ebinom nso pɛ sɛ wɔsɔ no hwɛ, enti wɔka kyerɛɛ no sɛ ɔnyɛ sɛnkyerɛnne bi a efi soro nkyerɛ wɔn.+ 17 Bere a ohuu wɔn adwene no,+ ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ahenni biara a ɛko tia ne ho no bɛsɛe, na ofi a ɛko tia ne ho no rennyina. 18 Enti sɛ Satan nso ko tia ne ho a, ɛbɛyɛ dɛn na n’ahenni agyina? Efisɛ moka sɛ menam Beelsebub so na etu ahonhommɔne. 19 Sɛ mede Beelsebub na etu ahonhommɔne a, mo mma* de hena na etu wɔn? Eyi nti, wobebu mo atɛn. 20 Na sɛ mede Onyankopɔn nsateaa+ na etu ahonhommɔne a, ɛnde na mo ne Onyankopɔn Ahenni abɔ nsianho.*+ 21 Sɛ ɔbarima hoɔdenfo de akode hyehyɛ ne ho wɛn n’aban a, n’agyapade renyera. 22 Nanso sɛ obi a ne ho yɛ den sen no bɛtow hyɛ no so, na odi no so nkonim a, ogye n’akode a ɔde ne ho ato so no nyinaa, na ɔkyekyɛ nneɛma a ogye fii ne nkyɛn no. 23 Obiara a onni m’afã no, ɔsɔre tia me, na obiara a ɔne me mmoaboa ano no, ɔhwete.+ 24 “Sɛ honhom fĩ bi fi obi mu a, ɔkɔfa asaase a ɛso awo so, na ɔhwehwɛ homebea, na sɛ wannya bi a, ɔka sɛ, ‘Mɛsan akɔ me fi a mitu fii mu no mu.’+ 25 Sɛ obedu hɔ a, ohu sɛ wɔaprapra ofi no mu asiesie mu kama. 26 Enti ɔkɔ kɔfa ahonhom ason foforo a wodi bɔne sen no ka ne ho, na wɔba mu bɛtena hɔ. Na saa onipa no awiei sɛe sen kan no.” 27 Bere a ogu so reka eyinom no, ɔbea bi fi nnipadɔm no mu teɛɛm ka kyerɛɛ no sɛ: “Anigye ne yafunu a enyinsɛn wo, ne nufu a wunumii!”+ 28 Ɛnna Yesu kae sɛ: “Daabi, mmom, anigye ne wɔn a wotie Onyankopɔn asɛm na wodi so!”+ 29 Bere a nnipadɔm no reboaboa wɔn ho ano no, ofii ase kae sɛ: “Awo ntoatoaso yi yɛ awo ntoatoaso abɔnefo; wɔhwehwɛ sɛnkyerɛnne. Nanso wɔremma wɔn sɛnkyerɛnne biara, gye Yona sɛnkyerɛnne no.+ 30 Na sɛnea Yona+ bɛyɛɛ sɛnkyerɛnne maa Niniwefo no, saa ara na onipa Ba no nso bɛyɛ sɛnkyerɛnne ama awo ntoatoaso yi. 31 Wobenyan anaafo fam hemmaa+ ne awo ntoatoaso yi mu nnipa aba atemmu no mu, na obebu wɔn fɔ, efisɛ ofi asaase ano betiee Solomon nyansa. Nanso hwɛ! nea ɔsen Solomon wɔ ha.+ 32 Nnipa a wɔwɔ Niniwe ne awo ntoatoaso yi bɛsɔre atemmu bere mu, na wobebu awo ntoatoaso yi fɔ, efisɛ asɛm a Yona kae no ma wɔsakrae.+ Nanso hwɛ! nea ɔsen Yona wɔ ha. 33 Sɛ obi sɔ kanea a, ɔmfa nsie, na ɔmfa nhyɛ kɛntɛn* ase, na mmom ɔde si kaneadua so,+ na ama wɔn a wɔba dan no mu no ahu hann no. 34 Nipadua kanea ne w’aniwa. Sɛ w’aniwa hwɛ tẽẽ* a, wo nipadua nyinaa nso hyerɛn;* nanso sɛ wowɔ ani a ɛbere ade* a, wo nipadua nso yɛ sum.+ 35 Ɛno nti monhwɛ yiye, ebia na hann a ɛwɔ mo mu no yɛ sum. 36 Enti, sɛ wo nipadua nyinaa hyerɛn na baabiara nyɛ sum a, nipadua no nyinaa bɛhyerɛn te sɛ nea kanea hyerɛn ma wunya hann no.” 37 Bere a Yesu kasa wiei no, Farisini bi srɛɛ no sɛ ɔne no mmedidi. Enti ɔkɔɔ ne fi ne no kodidii.* 38 Na bere a Farisini no hui sɛ wanhohoro ne nsa* ansa na ɔredidi no,+ ɛyɛɛ no nwonwa. 39 Na Awurade ka kyerɛɛ no sɛ: “Mo Farisifo, mohohoro kuruwa ne ayowa ho, na mo mu de, adifudepɛ* ne bɔne ayɛ mo ma.+ 40 Mo a munni adwene! Nea ɔyɛɛ akyi no, ɛnyɛ ɔno ara na ɔyɛɛ emu nso? 41 Na sɛ moreyɛ adɔe* a, momma emfi mo komam. Sɛ moyɛ saa a, mo ho bɛtew ade nyinaa mu. 42 Na mo Farisifo de, munnue, efisɛ muyi onunum ne akokɔbɛsa ne nhabamma* foforo biara so ntotoso du du,+ nanso Onyankopɔn atɛntrenee ne ne dɔ de, momfa nyɛ hwee! Ɛsɛ sɛ muyi ntotoso du du no, nanso ɛnsɛ sɛ mubu mo ani gu nneɛma a ehia paa no so.+ 43 Mo Farisifo, munnue, efisɛ mopɛ nkongua a ɛwɔ anim* wɔ hyiadan mu ne gua so nkyia!+ 44 Munnue, efisɛ mote sɛ ada* a nnipa nhu,*+ ada a nkurɔfo nantew so a wonnim!” 45 Ɛnna wɔn a wonim Mmara no mu baako ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɔkyerɛkyerɛfo, sɛ woka saa a, yɛn nso woayeyaw yɛn.” 46 Na Yesu kae sɛ: “Mo a munim mmara no, mo nso munnue, efisɛ mode nnesoa a emu yɛ duru soa nnipa, nanso mo ankasa de, momfa mo nsateaa baako mpo nka nnesoa no!+ 47 “Munnue, efisɛ musiesie adiyifo no adamoa,* nanso mo agyanom na ekum wɔn!+ 48 Biribiara kyerɛ sɛ munim nneɛma a mo agyanom yɛe, na mopene so, efisɛ wɔn na wokum adiyifo no,+ na mo na moresiesie wɔn adamoa.* 49 Eyi nti na Onyankopɔn nyansa nso kae sɛ: ‘Mɛsoma adiyifo ne asomafo akɔ wɔn nkyɛn, na wobekum wɔn mu binom, na wɔatan ebinom ani. 50 Ɛno nti, adiyifo mogya a wɔahwie agu fi bere a wɔhyɛɛ wiase ase* no nyinaa, wobebisa afi awo ntoatoaso yi+ hɔ, 51 efi Habel mogya+ so kosi Sakaria a wokum no afɔremuka ne asɔrefi no ntam+ no mogya so.’ Yiw, mereka akyerɛ mo sɛ wobebisa afi awo ntoatoaso yi hɔ. 52 “Munnue, mo a munim Mmara no, efisɛ moagye nimdeɛ safe no afi nkurɔfo hɔ. Mo ankasa moankɔ mu, na wɔn a wɔrekɔ mu no nso, musiw wɔn kwan!”+ 53 Enti bere a ofii hɔ no, akyerɛwfo ne Farisifo no begyinagyinaa ne ho bebree, na wobisabisaa no nsɛm foforo pii 54 de hwɛe sɛ ɔbɛka biribi ama wɔanya no anaa.+
^ Anaa “fɛm.”
^ Nt., “aba mo so dedaw.”
^ Nt., “aniwa a edi bɔne akyi; aniwa a enye.”
^ Anaa “morekyɛ ahiafo ade.” Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
^ Anaa “nna a wɔntoo so.”
^ Anaa “moreto wɔn nna so.”
^ Anaa “fi bere a wonyinsɛn woo nnipa (Greek, koʹsmos),” kyerɛ sɛ, Adam ne Hawa mma.